8 Talaabo oo lagu dhisayo Bogag soo degitaan oo wax ku ool ah | Martech Zone
8 Talaabo Lagu Sameeyo Abuurista Bogag Soo Deg Deg Ah Oo Waxtar Leh
Axad, Disembar 6, 2020 Axad, Disembar 6, 2020 Stefanie Siclot
The page degtey waa mid ka mid ah aasaaska aasaasiga ah ee ka caawin doona macaamilkaaga inuu ku dhex maro safarka iibsadaha. Laakiin maxay dhab ahaan tahay? Iyo tan ka sii muhiimsan, sidee bay si gaar ah ugu kobcin kartaa ganacsigaaga?
Si loo soo koobo, an bogga soo dejinta wax ku oolka ah waxaa loogu talagalay inay ka dhigto macaamil macquul ah inuu tallaabo qaado. Tani waxay noqon kartaa inaad iska qorto liiska emaylka, iska diiwaangeliso dhacdo soo socota, ama iibsato alaab ama adeeg. In kasta oo hadafka hore uu ka duwanaan karo, natiijadu waa isku mid. Taasina waa in loo beddelo macmiil macaamil mushahar qaata.
Hadda oo aan qeexnay waxa degitaan deg ahi yahay, aan ka hadalno waxyaabaha ka dhigaya a xallinta xalka qaabeynta webka. Waa kuwan talaabooyin aad raaci karto si boggaaga degitaanku u noqdo mid aan la adkeysan karin.
Tilaabada 1: Qeex Dhageystayaashaada Bartilmaameedka ah
Kahor intaadan bilaabin qorista, waa inaad leedahay fikrad cad oo ah cidda bartilmaameedkaagu yahay. Abuur qof macaamil ah adoo siinaya sifooyin gaar ah sida da'da, jinsiga, heerka waxbarashada, shaqada, dakhliga bishii, iyo inbadan.
Markaad sidan sameyso, waxaad awoodi doontaa inaad si cad u hagaajiso fariintaada, wax ka qabato dhib xanuun gaar ah, oo aad qeexdo faa'iidada sheygaaga. Ka dib markaad qeexdo dhagaystayaashaada, u gudub tallaabada xigta.
Tilaabada 2: Adeegso Sharciga Isukeenista
Khubarada cilmu-nafsiga bulshada waxay u tixraacaan ifafaalehan sidii qoto-dheer oo rabitaan ah in laga aarguto naxariista markasta oo qof wanaag kugu sameeyo. Shaybaarada bilaashka ah, warbixin faahfaahsan, ama xitaa liistada liistada-qorista fudud ayaa ah qaar ka mid ah hadiyadaha ay shirkadaha u adeegsadaan inay si wax ku ool ah ugu adeegsadaan xeeladdan.
Marka aan dhahno waad isku dayeysaa hel emaylka macaamiisha ama ha ku qormaan liiska boostada. Waxaad u ballan qaadi kartaa soo jeedin qiimo sare leh si aad ugu dhiirrigeliso inay ficil qaadaan. Haddiise aad bixinayso wax qiimo leh, markaa waxay u qaadan doonaan in waxa aad bixineysaa ay ka sii wanaagsan yihiin.
Talaabada 3: Qor Cinwaan Adag iyo Subheadline
Cinwaan cinwaan ah ayaa ah xariggaaga ugu muhiimsan ee aad ku macmilayso macmiil; madaxa-u-jeestaha oo soo jiito dareenkooda. Waxay u baahan tahay inay ujeeddadaadu si cad oo dhammaystiran u gaarto. Dhanka kale, cinwaanka hoosta hoose wuxuu bixiyaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan badeecadaada ama adeeggaaga si macaamiil looga dhigo inuu joogo oo wax badan u ogaado.
Markaad labadaba qoraysid, had iyo jeer u beddelo muuqaalkaaga faa'iido. Tusaale ahaan, haddii aad iibineyso taleefan casri ah oo leh nolol batari dheer, ha ka hadlin mAh (milliampere-saac). Taabadalkeed, waxaad dhahdaa "Binge-watch your Netflix jecel show hal mar." Sidan, waxaad u sheegeysaa sida sheygu u saameyn ku yeelan karo nolosha dhagaystayaashaada uuna u xallin karo dhibic xanuun gaar ah noloshooda.
Tilaabada 4: Bixi Cadeymo Bulsheed
Caddeynta bulshada waa cunsur muhiim u ah boggaaga degitaanka maadaama ay muujineyso macaamilkaaga mustaqbalka in dadku horayba uga faa'iideysanayaan astaamaha alaabtaada.
88% macaamiisha waxay ku kalsoon yihiin dib u eegista isticmaalaha sida ugu badan ee talobixin shaqsiyeed.
Marka isku day inaad ka hesho markhaatiyo macaamiisha faraxsan oo aad u fiirsato heerka beddelkaagu kor u kacayo. Ka dib oo dhan, dadku waxay u muuqdaan inay raacaan lo'da. Markay adhigu qanacdo, macaamiisha mustaqbalka waxay isku dayi doonaan inay ficil ku galaan si ay qayb uga noqdaan khibrada.
Tilaabada 5: Cinwaanka Qodobbada Xanuunka Vistors iyo Sidaad uga Bixin Lahayd
Aynu dhahno waxaad iibineysaa barnaamijka tababarka guriga ee bilowga ah. Mid ka mid ah qodobkaaga xanuunka halkan waa in macmiilkaagu uu yeelan karo arrimo kalsooni leh oo ka soo baxa culeyskooda. Waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku qabaan inay ku labistaan ​​dharkooda taasina waxay saameyn ku yeelatay noloshooda bulsheed.
Hadda, shaqadaadu waa inaad abuurto bog soo degitaan ah oo iftiiminaya qodobkan xanuunka ka dibna ka tirtira adoo adeegsanaya adeeggaaga. Cinwaankaaga ayaa u muuqan kara wax u eg:
Ka hel jaantus raaxada gurigaaga. Or Diyaarso bod xeebeedka xagaaga.
Waxaad markaa kala socon kartaa tan cinwaan hoosaad xiise leh:
Barnaamijkaan tababarka guriga waxaa loogu talagalay inuu hoos kuugu dhigo adigoon ku tiirsanayn qalabka, daawada, ama qalabka ugu dambeeya. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa waqti, dhiirigelin, iyo isdabajoog joogto ah.
Tallaabada 6: Soo-booqdeyaasha Tooska ah ee Wicitaanka Waxqabadka
Ka dib markii lagu daro walxaha aan soo sheegnay, waa waqtigii la abuuri lahaa Wicitaankaaga Waxqabadka. Waxay ubaahantahay inay gaabato, muuqato oo adeegsato luuqad qancisa. Aynu ku dhaganno barnaamijka tababarka guriga tusaale ahaan.
Halkii aad u degi lahayd mid guud Gudbi badhanka si aad u hesho emaylkooda, waad ku dhajin kartaa adigoo dhahaya Ku soo biir shaqaalaha or Bilaw gubida baruurtaas maanta. Sidoo kale waa inaad isticmaashaa sawirada soo jiidashada leh si aad si toos ah ugu hogaamiso macaamiisha wicitaanka-ficilka (CTA). Waxa intaa ka sii badan, u adeegso midabyo is-khilaafsan si aad u caawiso badhanka ka dhig mid muuqda.
Tallaabo 7: Tijaabo, Tijaabo, Tijaabo… Wax walba
Dabcan, waxaad wali ubaahantahay inaad sameyso baaritaanka A / B si aad u kordhiso sicirkaaga beddelka. Tijaabi wax kasta… dhinacyada naqshadeynta, sawirada, farta, cinwaannada, cinwaannada hoose, sawirrada, badhannada, wicitaan-ka-ficillada… wax walba. Bixinta istiraatiijiyadda bogga soo degitaanka waligeed ma dhameystirna istiraatiijiyad tijaabin la'aan.
Tijaabinta bogag badan oo kala geddisan shaqsiyaadka iyo qalabka kala geddisan sidoo kale waa istiraatiijiyad weyn. Haddii ay tahay istiraatiijiyad B2B ah, tusaale ahaan, waxaad jeclaan kartaa inaad hesho bog degitaan ah oo u gaar ah warshad kasta oo aad u adeegayso. Ama haddii ay tahay bogga soo degitaanka macaamiisha diirada saaraya, waxaad rabi kartaa inaad shakhsi ahaan ka kooban waxyaabaha iyo sawirada da'da, jinsiga, goobta.
Tallaabada 8: Isticmaal Barxad Bogga Soo Degitaanka
Nakhshadeynta bogga wax ku oolka ah ee wax ku oolka ahi uma baahna tan iyo dadaal ama waqti marka aad leedahay xalka bogga degitaanka saxda ah. Xallinta bogagga degitaanku waxay awood kuu siineysaa inaad dhisto bogag qurux badan oo degitaan leh karti u yeelasho, tijaabin, is-dhexgal, iyo edit aan dadaal lahayn.
Baadhid Saabuunta, waa xalka bogga sahlan ee la isticmaalo oo awood kuu siinaya adiga inaad ku dabaasho talooyinka ku jira qodobkan!
Bilow Tijaabada ama Hesho Demo ah Qalab
Laga soo bilaabo Macaamiisha Suurtagalka ah ilaa Taageerayaasha Raving
Bog soo degitaan oo kalifaya ayaa kordhin kara heerka beddelkaaga wuxuuna kaa caawin karaa kobcinta ganacsigaaga si dhakhso leh. Adoo raacaya tillaabooyinka kor lagu soo sheegay, waxaad kordhin doontaa waxtarka boggaaga soo degitaanka ka soo bilow oo hoos u dhig waqtiga ku habeeya. Kaliya xusuusnow inaad marwalba ka sarreyso wax kasta oo kale waxaadna macaamiisha mustaqbalka u rogi doontaa taageerayaal duufaan ah waqti aan fogeyn.
Daah-: Martech Zone waa gacansaar Saabuunta!
Tags: bogga soo dejinta wax ku oolka ahSaabuuntapage degteydejinta bogga naqshadacinwaannada bogga soo degayatallaabooyinka bogga soo degitaankatilmaamaha bogga soo degitaankacinwaan hoosaadmarqaatiyaal
Stefanie Siclot waa qeyb kamid ah kooxda SEO at Gantaal Kobcin, oo ah wakaaladda suuq geynta suuq geynta ee fadhigeedu yahay magaalada Los Angeles. Waxay mas'uul ka tahay kordhinta tayada iyo tirada taraafikada websaydhka oo macnaheedu yahay baashaal iyada.
Tirakoobka Ecommerce: Saameynta Cudurka Faafa ee COVID-19 iyo Qufulka ee tafaariiqda iyo khadka tooska ah